Khariidadaha Google, oo leh khadadka miiqyada - Gofumed
Abriil, 2008 Cartografia, Google Earth / Maps, topografia
Khariidadaha Google waxay ku darsadeen doorka muhiimka ah ee muujinta khariidada, oo ay ku jiraan khadadka konfurka oo ka yimid heer dhexe.
Tan waxaa lagu shaqeeyaa bidixda «Relief» gudeheeda aragtida qaloocana waa lagu dhaqaajin karaa ama lagu dhex dhaqaajin karaa badhanka saboolka ah.
Isha of dusha this ayaa isku dhafan Google waa model ah digital dhul markii hore ee ay soo NASA iyo sii by USGS, oo loo yaqaan SRTM-90m. shaqeynta Tani waa muuqaal ah ee Khariidadaha Google, Google Earth ee heerka model digital. xallinta dadban waa mitir 90 (kala duwan la lool) oo ku saleysan xariiqa qallooca this waxaa intiisa kale interpolated (Waxaa laga soo qaadayaa in oo dalka Mareykanka ah u dhaco by 30 mitir, laakiin aan waxtar lahayn noo). Waxaa lagu qiyaasaa in qaladka toosan tagaa by 16 mitir.
Kala soociddaan habkan waxaa laga dhigi karaa AutoCAD, helitaanka dhibcooyinka laga soo bilaabo shabakad iyo soo saarida qaab dhul ah oo leh curfadeeda.
Post Previous«Previous Blogger weyn ayuu ka fariistaa
Post Next Seminarada madaniga ah 3D istaraatijiyad wanaagsan oo ah AutoDesk ee SpainNext »
10 Jawaab ah "Khariidadaha Google, oo leh khadadka miiqyada"
Matías isagu wuxuu leeyahay:
Fiican ... Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii saldhiga "topographic" ee ay adeegsatay Google Earth si loo muujiyo aragtida 3D loona sameeyo astaamaha muuqaalka dhul ahaaneed waa naqshada SRTM 90m ama loo isticmaalo farsamooyinka sawir qaadista si loo sameeyo qaabka '3D'.
Samuel M. Corrêa isagu wuxuu leeyahay:
Ku calaamadaha elektifiga iyo farsamo-gacmeedyada iyo mashaariicda aasaasiga ah ee dhirta korantada. Gostaria oo wax badan ka ogaanaya meelahan moodada ah ee khariidadaha khariidadaha. Waxay noqon doontaa nao na roda.
Waxaa jira barnaamijyo kaladuwan oo laga soo dejisto. ArcGIS waxay leedahay kordhin, waxaad ku sameyn kartaa AutoCAD adoo adeegsanaya Plex.earth
Moodeelka Dijital ah waa SRTM adduunka. Faa'iidada cirifyada iyo wiishashkan waxay waxtar u yeelan karaan daraasadaha meelaha ballaaran, maaddaama si aad ah loo fududeeyay. Uma adeegayso inay saxeexdo marka loo eego daraasadaha sahaminta maxalliga ah Khalad la'aanta xagga sare u qaadida waxay dhex mari kartaa tiro +/- 20 mitir.
Arturo Cardona isagu wuxuu leeyahay:
Hambalyo ku saabsan shaqada wanaagsan ee la soo bandhigay:
Waxaan hayaa su'aal:
Heerka heerkulbaha mitir kasta oo laga heli karo Google Eulle, oo leh barnaamijyada qaar sida autocad 3d, waa maxay heerka saxda ah? Maxay tahay cabbirkaaga?
Kor ku xusan waa lagama maarmaan maxaa yeelay waxaan u baahanahay in aan tixraaco miisaan.
Adrián Giménez isagu wuxuu leeyahay:
Khadadka mowqifka ah waxaa lagu dhajin karaa khariidadaha GPS waxayna raaci karaan dhulalka si loo yareeyo? Waad ku mahadsan tahay
Maria Cedres isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado astaamaha sida loo dhigo isu-beddelashada meelo kala duwan
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida loo arko kontaroolka aagga xiidanka ee waaxda Lavalleja Uruguay
Stuart Perez isagu wuxuu leeyahay:
Subax wanaagsan, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida aan u heli karo kartoonka dhulka Jalapa Guatemala
omar isagu wuxuu leeyahay:
Hada, sidee baan ku dari karaa adeeggan heerkulka ah? Iyo qaraar sare oo sawirada dayax-gacmeedka. Waad ku mahadsan tahay
Filiberto Salvatierra isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ku arkaa inay aad u xiiso leedahay shaqada aad samaysay, haddii ay suurtagal tahay iigu sheegto ku saabsan sii deynta isla sidii aan ahay Fiisooyinka Fududeeyaha iyo in aan gargaar farsamo u diro beeralayda aagga uu ka shaqeeyo waaxda Jalapa, Guatemala